करोड लगानीमा पूर्वमन्त्री विष्टले गरे... :: नारायण खड्का :: Setopati
नारायण खड्का दाङ, माघ १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ विजौरीको डाँडा वर्षौंदेखि ‘बञ्जर’ थियो।
खाली डाँडामा स्थानीयले गाईवस्तु चराउँथे। कहिलेकाहीँ केटाकेटी टालाटुलीका फुटबल खेल्थे।
गत वैशाखअघिसम्म त्यो डाँडाको रूप फेरिएको थिएन। जब पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको नजर त्यो डाँडामा पर्‍यो, तब उनले डाँडामा फूल फुलाउने सपना देखे ।
त्यही सपनालाई पछ्याउँदै विष्टसहित तीन जनाले तुलसीपुर–घोराहीसडक खण्डमा पर्ने ६६ कठ्ठा क्षेत्रफलको ‘बञ्जर’डाँडा १५ वर्षका लागि भाडामा लिए। झण्डै ४० लाख तिर्नुपर्ने सर्तमा।
वर्षौंसम्म जग्गाधनी र स्थानीय कसैले पनि संभावना नदेखेको बञ्जर डाँडामा हाल ड्रागन फ्रुटका बोटले हराभरा बनेका छन्। आज त्यो डाँडा सुन्दर उद्यान जस्तै बनेको छ।
विष्टले ड्रागन फ्रुटको बीचमा सर्पगन्धा र कुरिल्लो पनि हुर्काएका छन्। उनको फर्ममा मुन्तला, सावर, टाटे सिमी, केपिलो मेलन जस्ता नौलो प्रजातिका बोटबिरुवा पनि हुर्किरहेका छन्।
सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुटको खेती दाङका स्थानीयका लागि नौलो खेती हो। यो जिल्लामा भित्र्याउने तथा व्यवसायिक खेती गर्ने पहिलो श्रेय विष्टलाई नै जान्छ।
हाल उनको फर्ममा सात हजार जति ड्रागन फ्रुट रहर लाग्दोगरी हुर्किरहेका छन्।
एभोकाडोको एउटा बिरुवालाई ५ सय रुपैयाँ पर्छ भने ड्रागन फ्रुटको प्रजाति अनुसार सेतोको प्रतिबोट २ सय र रातोको ३ सय रुपैयाँ किन्न पाइन्छ।
बाँके अत्यन्त गर्मी हुने ठाउँ र रोल्पा चिसो ठाउँ। के यस्तो ठाउँमा पनि ड्रागन फ्रुटको खेती संभव छ? भनेर हामीले सोध्दा उनले भने,‘चिउरी फल्ने ठाउँमा एभोकाडा र सिउँरी हुने ठाउँमा ड्रागन फ्रुट मज्जाले हुने गर्छ। ड्रागन फ्रुट उष्णप्रदेशीय फल हो। यसको खेती तराई तथा भित्री मधेशमा राम्रो मानिन्छ। समुन्द्री सतहबाट १५/१६ सय मिटरको उचाइसम्म पनि यसको खेती हुँदै आएको भए पनि ८/९ सय मिटरसम्म गरेको खेती राम्रो हुन्छ।’
आज विष्टको फर्म अवलोकन गर्न तथा बिरुवा किन्न टाढा–टाढाबाट मानिस आउने गर्छन्।
विष्टका अनुसार हालसम्म उनले झन्डै ८ देखि १० हजारसम्म ड्रागन फ्रुटको बिरुवा बेचिसकेका छन्। सरदर दुई लाखको बिरुवा बेचिसकेको बताउँछन् उनी।
नौलो प्रजातिको खेती भए पनि त्यसमा मानिसहरूको आकर्षण देखेर झनै उत्साहित छन् विष्ट।
१५ वर्षको अवधिमा झन्डै ३५ देखि ४० लाख जतिको बिरुवा मात्रै बेच्न उद्धेश्य छ उनको।
खेती गरेको तीन महिनामै केही बोटहरूमा फूल फुल्नुका साथै केहीमा फल समेत फल्न सुरू गरेपछि उनी औधी उत्साहित र खुसी थिए।
‘म पहिलो पटक फूल फुलेको हेर्न मध्य रातमा पनि बगैंचामै बसेको थिएँ,’ विष्टले भने।
रातमा मात्रै फूल फुल्ने हुँदा ड्रागन फ्रुटलाई ‘रातकी रानी’ पनि भन्ने गरिन्छ।
विष्टका अनुसार ड्रागन फ्रुट असारदेखि भदौसम्ममा ५/६ लटजति फल्ने गर्छ।
तर यो बीचमा विष्टलाई अग्रिम अर्डर आइसकेको छ। ‘यस पटक चार हजार बोटबाट ६/७ टन जति फल्ला त्यो एउटैलाई पुग्दैन,’ विष्टले भने, ‘सबै बिरुवाले फल दिन थालेपछि अर्को सालदेखि दिउँला भनेर अग्रिम बुकिङ गर्न आउने साहुजीहरूलाई फर्काउने गरेको छु।’
हालसम्म मोटामोटी एक करोड लगानी भइसकेको उनले अनुमान गरे।
विष्टले ५ वर्षमा लगानी उठाइसक्ने र थप १० वर्षमा मुनाफा लिने योजना उनको छ।
धेरैले सेल्फी खिच्ने र अवलोकन गर्न आउने ड्रागन फ्रुटको यो बगैंचा हुर्काउन/बढाउन पूर्वमन्त्री विष्टको सानोतिनो मेहेनत भने परेको छैन।
वैशाख/जेठको उखरमाउलो गर्मीमा समेत पूर्वमन्त्री फरुवा खनिरहेका हुन्थे। बञ्जर डाँडाभरी साना–साना खाडल लस्करै खनिरहेका हुन्थे। त्यसको बीच–बीचमा मान्छे कै उचाइका सिमेन्टका पोल लाइनमा लहरै गाड्थे।
दाङका स्थानीयले यस्तो विचित्रको कृषि कर्म कहिलै पनि देखेका थिएनन्।
त्यहाँ त झनै हालसम्म कुनै खेती नभएको नांगो डाँडो न थियो। त्यसैले परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका कसैले पनि त्यो कुनै कृषि कर्मको लागि हो भनेर विश्वास नै गरेका थिएनन्।
‘यो बञ्जर डाँडा थियो,मरुभूमि जस्तै,’ विष्टले विगत सम्झिए, ‘स्थानीयका लागि केही उब्जिने त कुरै भएन,केही उब्जिन्छ भनेर सपना देख्ने सम्भावना पनि थिएन।’
तै विष्टले कसैको वास्ता गरेनन्। खुरुखुरु काम गरिरहे। अनि आज नौ महिनाको अवधिमा उनको मेहेनतले फल दिएको छ। ‘गरे के हुँदैन’ भन्ने कुरा उनले सावित गरेका छन्।
‘मेहेनत गरे असम्भव भन्ने केही छैन, युवाहरू सामाजिक सञ्जालको लतले, विदेशको लतले र मदिराको लतले चौपट बन्दै गएको’ भन्दै पूर्वमन्त्री विष्टले चिन्ता व्यक्त गरे।
विष्टले ड्रागन फ्रुटको लागि मोटरसाइकलका फालेका टायर पनि क्यापका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
हालसम्म ३ हजार ५ सय जति टायर जिल्ला तथा बाहिरी जिल्लाबाट समेत खरिद गरेर ल्याएको उनले बताए। ‘बिरुवालाई सोफामा जस्तै आरामदायीपूर्वक बसाल्न टायरलाई क्यापको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ,’ विष्टले भने,‘त्यसैको लागि हामीले टायर मोटरसाइकल ग्यारेजहरूबाट खरिद गरेर ल्याउने गरेका छौं।’
यसअघि दाङ लगायत बाहिरी जिल्लामा समेत कालो चामलको खेती गरेर उनले चर्चा बटुलेका थिए।
रुकुमका स्थायी बासिन्दा तथा पूर्वमाओवादीका नेता हुन् विष्ट। उनी दुईपटक मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १, २०७६, ०४:४५:००